Author: Mezuru Kigaran
Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 2- Qod. Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 3- Qod. Sinnaanta Muwaadiniinta 9- Qod. Nidaamka Siyaasadeed Qod. Xidhiidhka Debedda Qod. Dhaqaalaha Dalka Qod. Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada Qod. Waxbarashada Dhallinyarada iyo Isboortiga Qod. Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka Qod. Daryeelka Somalipand Bulshada Baylahsan Qod.
Hirgelinta iyo Fasiraadda Qod. Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka Qod. Ciqaab iyo Dembi Qod. Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday Qod. Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca Qod. Xurmaynta Hoyga Qod. Qaybta 2aad Jamhuufiyadda Qaranka Qod. Tilmaanta Guud ee Golaha Qod. Tirada Golaha iyo Doorashadusa Qod. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada Qod. Muddada Xilka iyo Xilliga Doorashada Qod.
Xarunta Golaha Qod. Fadhiyada Golaha Wakijiada Qod. Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada Qod. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Wakiilada Qod. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale Qod. Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada Qod. Waayidda Xubinimada Golaha Wakiilada Qod. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada Qod.
Shaqaalaha Golaha Wakiilada Qod. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada Qod. Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada Qod.
Tilmaanta Guud ee Golaha Guurtida Qod. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Guurtida Qod. Fadhiga ugu Horeeya ee Dasturka Guurtida Qod. Xoghayaha Golaha iyo La-taliyayaal Qod. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Guurida Qod.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida Qod. Shaqo-ka-tegidda Xubinta Golaha Guurtida Qod. Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida Qod. Kala-diridda Golaha Qod. Fadhiyada iyo Kal-fadhiyada Qod. Xarunta Golaha Guurtida Qod. Soo Bandhigidda Mashruuc-Sharci Qod. Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka Qod.
Habka loo Raaco Xeer-dejinta Qod. Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda Qod. Xubinta 1aad Qod. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Qod. Waaxda Fulinta Qod. Habka Doorashada Qod. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Qod. Mushaharka iyo Gunnada Qod. Muddada Xilka Qod.
Awoodaha Madaxweynaha Qod. Awoodaha Madaxweyne Dastuueka Qod. Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka Qod. Golaha Wasiirada Qod. Sii-haynta Xilka Qod. Qaybta 4aad Xubinta 1aad Waaxda Garsoorka Qod. Waaxda Garsoorka Qod.
Dhismaha Garsoorka Qod. Maxkamadda Sare Qod. Maxkamadaha Hoose Qod. Maxkamadaha Ciidamada iyo Dastuurkq Qod. Guddida Cadaaladda Qod. Hawsha Guddida Cadaaladda Xubinta 2aad Qod. Qaab-dhismeedka Dalka Qod. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka Qod. Golayaasha Gobollada iyo Degmooyinka Qod. Baahinta Awoodda Maamulka Xubinta 3aad Qod. Guddida Culimada iyo Waajibaadka Guddida Qod. Tirada Guddida iyo Muddada Xilka Qod. Shuruudaha Xubnaha Qod. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha Qod.
Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada Qod.
Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada Qod. Xubinta 4aad Qod. Ciidamda Booliska iyo Asluubta Qod.
Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka Qod. Saldhigga iyo Sarraynta Dastuurka Qod.
Dhaarta Dastuuriga ah Qod. Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Somakiland account.